လုပ်ကြပါဦးဗျို့ — MYSTERY ZILLION
တနေ့က Internet shop တစ်ခုမှာ သီချင်းကူးရင်းနဲ့ Virus လားမသိဘူး ကျွန်တော့ Stick ထဲ၀င်လာတာ။
Stick က သီချင်းဖွင့်လို့ရတော့၀ူး (:((:((
(Stick က ဂျပန်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီက လက်ဆောင်ရထားတာမို့ နှမြောတယ်ဗျ :D)
Stick က သီချင်းဖွင့်လို့မရတာကလည်း File အားလုံးမဟုတ်ပဲ File နှစ်ခုပဲ ဖွင့်လို့မရတာပါ
File တစ်ခုကို Delete လုပ်လိုက်တော့ နောက်ထပ် File တစ်ခုဆီထပ် ရောက်သွားပြန်ပါတယ် :O:O:O
တခြား သီချင်း File တွေကတော့ ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လည်းပြောကြပါဦးဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ Virus လို့ပဲထင်တာပဲ :39::39::39:
(Virus က shop က Anti-Virus နဲ့ သတ်လို့မရပါ (:((:(()
နည်းလမ်းလေးတွေရှိရင် မစကြပါဦး :77::77::77:
You should write down clearly .. I mean .. you to mention the type of file such as mp3 / mp4 .. If we knew, we can find solution ...
မရတော့ရင်တော့ Format လေးချကြည့်ပေါ့....:D :O
ညမင်းသား wrote: »
သီချင်း ဖွင့်လို့ မရဘူးဆိုတဲ့ stick က mp3 လား mp4 လား မသိဘူးနော်... file တစ်ခု ဖြတ်လိုက်တော့ နောက် file ထဲ ရောက်သွား တယ် ဆိုတော့ ဘယ်လိုရောက်သွား လဲ မသိဘူးနော်..အကို ကူး လိုက်တဲ့ သီချင်း က အမ်ပီ3 လား အမ်ပီ4 လား သေချာပြောရင်ကောင်းမယ် နော်.. နောက်ပီးတော့ virus ကြောင့်လိုတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တာပဲ... အကောင်းဆုံးကတော့ stick ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ file လေး တွေကို ကော်ပီကူး ယူထား ပြီးတော့ format ချပြီး ပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်...
ကျွန်တော် ပြောကြည့်တာ မှားရင်လည်း ခွေးလွှတ်ကြအုံးနော်..အဲ...ခွင့်လွှတ်ဖို့့ ပြောတာနော်..:P:5:
File type is mp3......
သီချင်း ဖွင့်လို့ မရဘူးဆိုတဲ့ stick က mp3 လား mp4 လား မသိဘူးနော်... file တစ်ခု ဖြတ်လိုက်တော့ နောက် file ထဲ ရောက်သွား တယ် ဆိုတော့ ဘယ်လိုရောက်သွား လဲ မသိဘူးနော်..အကို ကူး လိုက်တဲ့ သီချင်း က အမ်ပီ3 လား အမ်ပီ4 လား သေချာပြောရင်ကောင်းမယ် နော်.. နောက်ပီးတော့ virus ကြောင့်လိုတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တာပဲ...
ကျွန်တော် ပြောကြည့်တာ မှားရင်လည်း ခွေးလွှတ်ကြအုံးနော်..အဲ...ခွင့်လွှတ်ဖို့့ ပြောတာနော်..:P
stick က mp3 ပါ။ ကျွန်တော့ mp3 ကိုဗျာ ကျွန်တော်က သီချင်း folder တွေအများကြီးခွဲထားတယ်ဗျ။ [Eg. Rock>Heavy Rock>Lay Phyu/ Myo Gyi..]
ကျွန်တော့သီချင်း type က mp3 တွေများပါတယ်။ wma file တွေလည်း နည်းနည်းတော့ ပါတာပေါ့။ ဖြစ်ပုံက Stick က foder နှစ်ခု [ Dj Songs folder ထဲက (Trance Mix နဲ့ Dj Mix) folder နှစ်ခုမှာပါ။] အဲဒါကို ကျွန်တော်က Trance Mix folder ကို ဖျက်လိုက်တယ်ဗျာ။
ဖျက်လည်းပြီးရော Dj Songs Folder ထဲက (Dj Mix နဲ့ Techno) Folder နှစ်ခုလုံး ဖွင့်လို့ရတော့၀ူး (:((:(( ဖွင့်လို့မရတာက သီချင်းကို Error ပြတယ်။ ပြီးတော့ သီချင်းက ဖွင့်လိုက်ရင် ထစ်နေတယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ stick ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ file လေး တွေကို ကော်ပီကူး ယူထား ပြီးတော့ format ချပြီး ပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်...
အဲလို copy လုပ်လိုက်တာ Internet ဆိုင်က Photo File တစ်ခုလုံးပျက်သွားပါရောလား :O:O:O
(အဲဒီ file က ကျွန်တော် down ထားတာတွေပါ) (:((:((:((:((
င်္format ကဖြစ်နိုင်ရင် မချချင်ဘူး :D:D
်copy မလုပ်ပဲ format ချလိုက်ရင် ပျက်သွားတဲ့ file တွေကို Recovery Software နဲ့ ပြန်ရနိုင်ပါသလား။ တော်ကြာ Virus ဆို ပြန်ပါလာနေမှ အခက် :O:O:O
ပြန်ရနိုင်ပါတယ် ဗျာ။ Format ချပြီး Get Data Back For FAT နဲ ့စမ်းကြည့်လိုက်ပါလားဗျ။.........
Get Data Back For FAT က format ချပြီးမှ သူ့ဟာသူ ပေါ်လာမှာလား :39::39::39:
Get Data Back For FAT က format ချပြီးမှ သူ့ဟာသူ ပေါ်လာမှာလား
အမ်....get data back for fat ဆိုတာ recovery software လေ..
အကောင်းဆုံးကတော့ရှေ့ကဘော်တာတွေပြောသလို Format ရိုက်ပြီး get data back for FAT ကိုမသိဘူးဆိုရင် Tuneup 2008/2009 မှာတဲ့ undelete ကိုသုံးပြီးအစ်ကိုရဲ့ data တွေကိုပြန်ယူ